Online Burma Library > Main Library > Politics and Government > Burma/Myanmar's Legislature > Parliament > Pyidaungsu Hluttaw (Union Parliament): - legislation and other proceedings > Pyidaungsu Hluttaw: Laws and bylaws/rules/regulations proposed (bills) and/or adopted in 2012
> Pyidaungsu Hluttaw (Union Parliament): - legislation and other proceedings
> Pyidaungsu Hluttaw: Laws and bylaws/rules/regulations proposed (bills) and/or adopted in 2012
Title: Pyidaungsu Hluttaw Law 23/2012 - ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ (၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၃)
Title: Pyidaungsu Hluttaw Law 24/2012 - အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ (၂ဝ၁၂ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၄)
Title: Pyidaungsu Hluttaw Law 22/2012 (၂ဝ၁၂ခုနှစ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၂) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်�
Title: Foreign Investment Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 21/2012 (Burmese) (၂ဝ၁၂ခုနှစ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၁) နိုင်ငံခြားရင်းနှီး
Alternate URLs: http://www.president-office.gov.mm/en/hluttaw/law/2012/11/23/id-1103
http://www.networkmyanmar.org/images/stories/PDF14/FIL-Project-Translation-V1.pdf (alternative translation)
Title: Pyidaungsu Hluttaw Law 18/2012 (၂ဝ၁၂ခုနှစ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၈) ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကြယ်ငါး�
Title: Pyidaungsu Hluttaw Law 19/2012 (၂ဝ၁၂ခုနှစ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၉) မြေသိမ်း (သတ္တုတွင်းများ) အက်ဥပဒေကိ�
Title: Pyidaungsu Hluttaw Law 20/2012 (၂ဝ၁၂ခုနှစ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၀) ပြည်သူ့အကျိုးပြုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန
Title: 2012 Social Security Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 15/2012 - လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေ (၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေ အမှတ် ၅)
Title: Civil Servant Bill လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း
Title: Law revoking the Foreign Relations Act, Pyidaungsu Hluttaw Law No. 14/2012 - နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးအက်ဥပဒေရုတ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ
Title: Foreign Exchange Management Law - Pyidaungsu Hluttaw Law 12/2012 (၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၂) နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စ�
Title: Pyidaungsu Hluttaw Law 13/2012 (၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၃ အရေးကြီးကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုဥပ�
Title: Anti-Bribery Bill - လဒ်ပေးလဒ်ယူမှုပပျောက်ရေးဥပဒေကြမ်း
Title: Bill Revoking The Land Acquisition (Mines) Act- 2012/ မြေသိမ်း (သတ္တုတွင်းများ) အက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေကြမ်း
Title: Bill Amending the Code of Civil Procedure - တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း
Title: Bill Amending the Contempt of Court Act - တရားရုံးများမထီမဲ့မြင်ပြုမှုဥပဒေကြမ်း
Description/subject: Revoking the Contempt of Courts Act, 1926 by this Law... the Contempt of Courts Act, 1926 ကို ဤဥပဒေ ဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်...
Title: Bill Amending the Limitation Act - ကာလစည်းကမ်းသတ်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်း
Title: Bill Amending the Penal Code - ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Title: Regulations relating to the Right to Peaceful Assembly and Peaceful Procession,5July 2012 - စုဝေးခွင့်နှင့်စီတန်းလှည်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများ
Source/publisher: "The Mirror" ("Kyemon") ကြေးမုံ 10 July 2012
Title: Families of Disabled or Deceased Soldiers Supporting Act - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 8/2012 (Burmese မြန်မာဘာသာ)
Description/subject: မသန်မစွမ်း၊ သေဆုံး/ကျဆုံးတပ်မတော်သားများ၏ မိသားစုများအား ထောက်ပံ့စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၈)
Source/publisher: "The Mirror" ("Kyemon") ကြေးမုံ 31 March 2012
Title: Labour Disputes Settlement Act - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 5/2012 - ၂၀၁၂ခုနှစ် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ
Source/publisher: "The Mirror" ("Kyemon") ကြေးမုံ 29 March 2012
Title: State Budget Law 2012 - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 6/2012 - ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေ ၂၀၁၂
Description/subject: Adopted 20 March 2012, published 1 April 2012....."The objectives of this Law are as follows:
(a) to enable to implement the Myanmar National Environmental Policy;
(b) to enable to lay down the basic principles and give guidance for systematic
integration of the matters of environmental conservation in the sustainable
(c) to enable to emergeahealthy and clean environment and to enable to
conserve natural and cultural heritage for the benefit of present and future
(d) to reclaim ecosystems as may be possible which are starting to degenerate
(e) to enable to manage and implement for decrease and loss of natural
resources and for enabling the sustainable use beneficially;
(f) to enable to implement for promoting public awareness and cooperation in
educational programmes for dissemination of environmental perception;
(g) to enable to promote international, regional and bilateral cooperation in the
matters of environmental conservation;
(h) to enable to cooperate with Government departments, Government
organizations, international organizations, non-government organizations
and individuals in matters of environmental conservation..."
Title: National Plan for Financial Year 2012-13 - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 4/2012 - ၂၀၁၂-၁၃ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ
Source/publisher: "The Mirror" ("Kyemon") ကြေးမုံ 20 March 2012
Title: Union Election Commission Law - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 3/2012 / ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေ
Title: Union Supplementary Budget Allocation Law (2012) - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 2/2012 - ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ
Source/publisher: "Myanmar Alin" 25. 2. 2012 မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ
Title: Ward or Village Administration Act - Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2012 - ရပ်/ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ
Title: Bill Amending the Code of Criminal Procedure / ရာဇ၀တ်ကျင့်ထုံး ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း (Burmese မြန်မာဘာသာ)